Hambantota [Sri Lanka], July 11 (ANI): Sri Lanka skipper Angelo Mathews has admitted that the unexpected 2-3 home series loss to Zimbabwe is "one of the lowest points" of his career and a "hard one to swallow".
Hambantota [Sri Lanka], July 11 (ANI): All-rounder Sikandar Raza starred with both bat and ball to help Zimbabwe beat Sri Lanka by three wickets and clinch a historic series victory in the fifth and final ODI at the Mahinda Rajapaksa International Stadium, Hambantota on Monday.
Spinners, Tharanga steer Lanka to series-levelling ODI win over Zi
Colombo [Sri Lanka], July 1 (ANI): Sri Lanka pace spearhead Lasith Malinga will miss the second ODI of the ongoing five-match series against Zimbabwe as he has contracted viral influenza and has been recommended 48 hours of rest following medical assessment.
Nyamakate [Zimbabwe], June 8 (ANI): At least 43 people were reportedly killed and several others injured in a bus accident, involving a Zambia bound King Lion bus, in Zimbabwe's Nyamakate area last night.
Johannesburg [South Africa], Mar.22 (ANI): Scotland is all set to host Zimbabwe for a two-match ODI series in June this year, the Cricket Scotland has confirmed the news.